Xaaladda magaalada Marka oo yara xasiloon ka dib dagaal ka dhacay saakey | Markacadey.com
May 24, 2015	markacadey	-
Xaaladda magaalada Marka oo yara xasiloon ka dib dagaal ka dhacay saakey
Rasaas teel teel ah ayaa laga maqlaayaa gudaha magaalada Marka, waxaa is horfadhiyo ciidamadii maamulka iyo maaleshiyaadka Habargidir oo ay kaabayaan maleeshiyaad dowladda ugu magacaaban Milateriga Soomaalia.
Tan iyo ilaa shalay ayaa magaalo madaxda Shabeelada hoose waxaa ka dhacayi dagaal laysu adeegsaday hubka culculus iyo kan fudud, dagaalkaaan ayaa wuxuu u dhaxeeyaa Ciidanka KGS iyo maleeshiyo ka sood duushay gobolada dhaxe oo gacan saar la leh dowladda federaalka.
Maleeshiyadan caadaysatay dhul boobka Shabeelaha hoose iyo barakiicnta dadka deeganka ayaa sanooyikan wada dagaal gardarro ah oo ay ku heyso guud ahaan gobolka, iyada oo maleeshiyadan lagu kari la’yahay in iska daayaan dulmiga iyo gardarada cadaanka ah.
Shacabka reer shabeelada hoose waxay ka midaysan yihiin in ay iska dhiciyaan mooryaantan daandaansiga ku heysa iyaga oo u dagaalmaya xaqooda maadama ay xaq tahay in uu qofku ku jihaado xoolihiisa iyo naftiisa.
Shacabka degan Shabeelda hoose waxay dowladda KGS ku eedaynayaan gaar ahaan madaxweyne Shariif in uu qeyb ka yahay dagaalkan maadaama uu san wax ka qabanayn dagaalka lagu wado shacabka uu maas,uulka ka yahay ee soo laalaabtay, isaga oo og dadka dulmiga wada in ay yihiin mooryaan ka duushay Guri ceel.
Dagaalkan ma joogsaanaya ilaa ay shacabka Shabeelada hoose helaan cadaalad dhameystiran oo y ku helaan dhulkooda , mooryaantana lagu celiyo halka ay ka soo hayaameen.